Maitiro ekubvisa ruzha kubva pavhidhiyo paMac | Ndinobva ku mac
Maitiro ekubvisa ruzha kubva kuvhidhiyo paMac
Kana zvasvika pakugovera vhidhiyo, zvichienderana nezviri mukati, isu tingangofarira bvisa odhiyo. Isu tinogona zvakare kuzviona isu tiri mukuda ikoko pakugadzirisa vhidhiyo kubva kuMac yedu kuwedzera dubbing, kumashure mimhanzi ...
Pasinei nechikonzero chaunoda bvisa ruzha kubva vhidhiyo paMac, munyaya ino tichakuratidza kuti ungazviita sei. Kuita izvi, tinogona kushandisa zvese zvemahara uye zvakabhadharwa zvikumbiro.
4 Akanaka akachekwa
iMovie, sezvamunoziva mose, ndiyo yemahara vhidhiyo yekugadzirisa app iyo Apple inoita kuti iwanikwe kune vese vashandisi veIOS uye macOS. Zvakafanana nemini Final Cheka Pro, Apple's nyanzvi yekugadzirisa software inodhura anopfuura mazana matatu emaeuro.
Ne iMovie, isu hatigone chete kugadzira mavhidhiyo akanaka, tichishandisa matemplate, shanduko yemarudzi ese, kutamba negirinhi kana yebhuruu kumashure kuti titsive nemimwe mifananidzo, asi zvakare. inotibvumira kubvisa ruzha kubva kune chero vhidhiyo.
Kana iwe wakamboshanda nechirongwa chekugadzirisa vhidhiyo, unozokwanisa kutarisa kuti sei kushanda kweiMovie kwakafanana, iine mitsara yenguva inotibvumidza kumisa kurongeka kwemavhidhiyo, matepi ekuteerera anoridzwa ...
Vhidhiyo dzinosanganisira yavo odhiyo inosanganisira mukati, a mutsara wegirini unotiratidza mwero wekurira kwenziyo iyoyo. Nokusingaperi, ruzha runoridzwa pa100%, kureva kuti, pavhoriyamu imwechete sezvayakanyorwa.
Kana tichida kudzikisa volume tinofanira isa mbeva pamusoro pemutsara iwoyo uye udzikise kusvika wawana vhoriyamu yakakodzera. Asi kana chatinoda chiri kubvisa zvachose, tinofanira kudzikisa mutsara iwoyo kusvika chiyero chevhoriyamu chave zero.
Kana tangodzikisa huwandu hwevhidhiyo kana chidimbu chevhidhiyo kusvika zero, tinofanira ponesa chirongwa uye totumira kune iyo fomati yatinoda kuti tigozogovana gare gare.
Kana zvaurikuda kudzima audio yevhidhiyo ichava chikamu cheimwe, haufanirwe kuidzima wakazvimirira, sezvo uchikwanisa kuzviita munguva yevhidhiyo iyoyo, sezvo maodhiyo emavhidhiyo ese akazvimirira, kureva kuti, tinogona kusimudza, kudzikisa kana kudzima odhiyo zvinoenderana nezvatinoda pasina. zvinokanganisa mamwe mavhidhiyo.
Unogona download iMovie zvachose yemahara macOS kuburikidza neiyi link.
VLC ndiyo yakanakisa vhidhiyo inoridza iripo pamusika uye kana ini ndati zvakanakisa, ndinoreva zvakanakisa, kwete imwe yeakanakisa. Yayo yekare interface parutivi, VLC ndeye mutambi inoenderana neimwe uye yega yega vhidhiyo uye maodhiyo mafomati pamusika.
Mukuwedzera, ndizvo open source, saka hatifanirwe kushandisa imwe euro pane iyi application kuti tiwane mabasa ayo ese. Iyi purojekiti inochengetedzwa zvichienderana nezvipo kubva kune vashandisi. uye inowanikwa kune ese anoshanda masisitimu aungafungidzira.
VLC haingori inonakidza vhidhiyo inoridza, asi inosanganisirawo mamwe maficha akadai sekugona download mavhidhiyo eYouTube, wiriranisa odhiyo nevhidhiyo (kana izvi zvisingaenderani pamwe chete) uye kunyangwe mukana we bvisa audio kubva muvhidhiyo.
Para bvisa audio kubva muvhidhiyo Nekushandisa kweVLC, tinofanira kuita nhanho dzandinokuratidza pazasi:
Kana tangovhura iyo VLC application, tinofanira tinosarudza vhidhiyo kwatinoda kubvisa audio.
Tevere, tinya pane Zvishandiso - Zvaunoda.
Muchikamu cheZvido, tinoenda Audio. Mukona rezasi kuruboshwe tinya pa Todo.
Zvino mubhokisi rekutsvaga tinonyora Vhura audio.
Muchikamu chekurudyi, tinobvisa bhokisi Gonesa odhiyo.
Pakupedzisira, tinobaya pane bhatani Chengetedza shanduko yatakachinja.
Unogona download VLC zvachose yemahara yeMacOS kuburikidza iyi link
Imwe yakanakisa yemahara uye yakavhurika sosi application inotitendera kushanda mukugadzirisa vhidhiyo ndeye Avidemux, chikumbiro chave chiri pamusika kwemakore mashoma uye kuti, chokwadi, iwe wakanzwa nezvazvo, ingangoita veteran zvakanyanya, sezvo yaishandiswa nguva nenguva patakange tine dambudziko nekuenderana kweaudio nevhidhiyo.
Asi pamusoro pekutibvumira kuwiriranisa odhiyo uye vhidhiyo, iyo application zvakare inotibvumira kubvisa audio track zvachose kubva muvhidhiyo. Kuti ubvise odhiyo track kubva muvhidhiyo ine Avidemux, isu tinofanirwa kuita matanho andinokuratidza pazasi:
Kutanga, isu tinomhanyisa application uye tinovhura vhidhiyo yatinoda kubvisa audio.
Tevere, mukoramu yekuruboshwe, muchikamu Audio kubudiswa, tinya pane yekudonhedza-pasi menyu uye sarudza hapana (hapana muChirungu).
Pakupedzisira, tinodzvanya pane Faira menyu uye sarudza Save.
Unogona download Avidex zvachose yemahara yeMacOS kuburikidza iyi link
Sezvo makore apfuura, iMovie yakaita kuwedzera zvishoma zvinodiwa Kuti umhanye paMacOS uye parizvino iyo yakaderera yakatsigirwa vhezheni ndeye macOS 11.5.1 Big Sur.
Kana timu yako haienderane ne iMovie, uye iwe unoda kugadzirisa mavhidhiyo ako nenzira iri nyore, pamusoro pekuve nesarudzo yekubvisa odhiyo kubva mumavhidhiyo, unofanirwa kupa Cute Cheka kuyedza, application yatinogona kudhawunirodha mahara muMac App Store uye izvo. haisanganisi chero mhando ye-mu-app kutenga.
Kushanda kwechishandiso ichi kwakafanana nemamwe mapurogiramu ekugadzirisa mavhidhiyo. For bvisa audio kubva muvhidhiyo, tinofanira kuiwedzera kumutsara wenguva uye, mumutsara wekurudyi, muchikamu cheInzwi, kuderedza inzwi kusvika kune zvishoma.
Akanaka akachekwa inoenderana neOX 10.9, shanduro yakatangwa pamusika muna 1999, kureva kuti, inowirirana neMac chero ipi zvayo kubvira gore iroro.
Unogona download Cute Cut zvachose yemahara macOS kuburikidza neiyi link.
Cute CUT - Movie Mugadzirivakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekubvisa ruzha kubva kuvhidhiyo paMac
Iwo akanakisa emahombekombe emadziro eMac
Apple inovhara zvimwe zvitoro nekuda kwedenda